Ogaden News Agency (ONA) – Gudomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo Magacaabay Gudiga Anshaxa Doorashada.
Gudomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo Magacaabay Gudiga Anshaxa Doorashada.
Guddoomiyaha Barlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari ayaa Magaalada muqdisho kaga dhawaaqay guddi ka kooban 9 xubnood oo ka shaqaynaya Ilaalinta anshaxa iyo asluub-wanaagga iyo Bedqabka geedi socodla doorashadda madaxweynaha Soomaaliya.
War-Murtiyeed uu soo saaray Mudane Jawaari waxaa sharaxaad lagaga bixiyay shaqooyinka iyo waajibaadka guddiga, waxaana ujeedada loo dhisay guddiga lagu sheegay in looga golleeyahay in barlamaanka, murashixiinta tartamaya iyo dadweynaha Soomaaliyeed hubiyaan habsami u socodka, daahfurnaanta iyo bedqabka geedi socodka doorashadda madaxwaynaha.
Guddigu wuxuu kaloo u kuur gali doonaa habraaca iyo dhammaan hawlgallada la xidhiidha hirgalinta doorashada madaxweynha iyo sidoo kale wargalinta guddoonka barlamaanka wixii khilaafsan xeer-hoosaadka ama nidaamxumo u keeni kara bedqabka geeddi socodka doorashada.
Gabagabadii, Magacaabista guddigan anshaxa doorashada ayaa ku soo aadaysa, iyadoo murashixiinta qaarkood ay dalbadeen in laga saaro xubnaha Gudddiga doorashada Madaxweynaha Xildhibaan Fartaag oo si badheedh ah u taageeray murashaxa madaxweynaha Soomaaliya Xasan shiikh Maxamuud xaflad ka dhacday Hotel SYL ee Magaaladda Muqdisho.